ग्लाेबल हेल्थ Archives – healthykhabar.com
अपरेशनको तयारी गरेका डाक्टरको अपरेशन थिएटरमै मृत्यु
साउदी अरबमा एक शल्य चिकित्सकको अपरेशन थिएटरमै मृत्यु भएको छ। अर्थोपेडिक अपरेशनको तयारी गरिरहेका डा.महदी अल–इमारीको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको साउदी मिडियाले जनाएका छन्। महदीको खामीको मुशाइत सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। अपरेशनको तयारी गरिरहेका बेला डा महदी बिरामी भएको थाहा पाएपछि सहकर्मीहरुले उनलाई मुटुको समस्याको परीक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए। इसिजी गरेपछि महदीले बिरामीको अपरेशन गरे या गरेनन् भन्नेबारे भने स्पष्ट छैन। छाती तथा पेटमा समस्या आए पनि सुरुमा डा महदीले बिरामीको अपरेशन गर्ने बताएका थिए। तर सहकर्मीको आग्रहपछि उनको इसिजी गरिएकोमा हृदयाघात भएको पाइएको थियो। एजेन्सी
नयाँ बेहुलीलाई १३ हजार डलर जरिवाना
लन्डन,१० कार्तिक । बेलायती प्रहरीले दक्षिण लण्डनमा एक नयाँ बेहुलीलाई विवाहमा कोभिड–१९ नियन्त्रण उपाय उल्लङ्घन गरेको आरोपमा १३ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको छ। प्रहरीले विवाहमा सहभागी करिब २०० पाहुनालाई नियम उल्लङ्घन गरी विवाहमा सम्लग्न भएको भन्दै घर फिर्ता गरिदिएको लण्डनबाट प्रकाशित इभ्निङ स्ट्याण्डर्ड दैनिक पत्रिकाले आइतबार उल्लेख गरेको छ। विवाहमा निम्ता दिएकी ती महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी १३ हजार अमेरिकी डलर जरिवानासम्म तिर्नेगरी धरौटीमा रिहा गरेको छ। प्रहरीले आफूहरूलाई स्थानीय वासिन्दाले विवाहमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि तय गरेको नियम उल्लङ्घन गरेको भनी सूचना गरेपछि छापा मारेको थियो। विवाहमा दुलही र एक अन्य व्यक्तिलाई कोरोनाभाइरस नियन्त्रण कानून अनुसार जरिवाना हुनसक्ने बताइएको छ। पत्रिकाले जासुस प्रहरी सुपरिन्टेन्डेन्ट निक्की आरोस्मिथलाई उद्धृत गरी भनेको छ, ‘यो घटना कोभिड–१९ कानुनको जानाजानी उल्लङ्घन भएको र यसका कारण सङ्क्रमणको फैलिने सम्भावना थप हुने भएकोले उनलाई जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको छ।’ विवाहमा २०० भन्दा बढी मानिस सहभागी भएका कारण यसले सामाजिक दूरी कायम नगरेको देखिएकोले जरिवानाका लागि सिफारिस गरिएको…
कोभिड-१९ विरुद्ध खोप तयार भएको कल्पना गरौँ। खोप बनेको अवस्थामा विश्वनेताहरूसँग त्यो कसरी मानिसहरूसम्म पुर्‍याउने भन्नेबारे विकल्पहरू हुनेछन्। जस्तै बिरामीको समीपमा हुने नर्स, डाक्टर र स्याहारमा खटिने कर्मचारीसहित सबैभन्दा जोखिमयुक्त वर्गमा पर्ने मानिसहरूलाई सबैभन्दा पहिले सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो गर्न सजिलो छैन। ज्येष्ठ उमेर समूहका मानिसलाई खोप दिनु सहज कुरा हैन। क्यानडाको यूनिभर्सिटी अफ ग्वेल्फमा खोपविज्ञानका प्राध्यापक सायन सरिफ भन्छन्: "बूढाबूढीका लागि सोचेर बनाइएका खोपहरू हामीसँग निकै कम छन्।" "गत शताब्दीमा धेरैजसो खोप बाल्यकालमा लाग्ने रोगलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका छन्।" सत्तरी वर्ष लागेपछिका मानिसलाई दिइने दाद भने एउटा अपवाद हो। वयस्क अवस्थामा देखिने मेनिन्जाइटिस वा ह्यूमन प्यापिलोमा भाइरसजस्ता केही रोगका लागि एक-दुईवटा खोपहरू छन्। अन्यथा रोगप्रतिरक्षासम्बन्धी विज्ञान बालबालिकाको पक्षमा बढी ढल्किएको छ। बाल्यकालमा लाग्ने रोगबारे हामीसँग प्रशस्त ज्ञान छ," सरिफले भने। "तर युवा, अधबैँसे र बूढाबूढीमा लाग्ने रोगबारे हामीसँग धेरै अनुभव छैन।" जटिल पक्ष ज्येष्ठ नागरिकमा खोप दिने कामको जटिलता बुझ्न हामीले उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीको फरकपन बुझ्नुपर्छ। धेरैजसो…
दुई महिनामै फोक्सोको क्यान्सरलाई जिते अभिनेता सञ्जय दत्तले
काठमाडौं । भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्त क्यान्सरमुक्त हुनुभएको छ । भारतीय पत्रिका दैनिक भास्करका अनुसार अभिनेता दत्तका निकट साथी एवं व्यापार विश्लेषक राज बंसले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । साथै कोकिलाबेन अस्‍पतालले पनि पनि यसको पुष्टि गरेको दैनिक भास्करले जानकारी दिएको छ । यसअघि साउन २५ गते दत्तलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।सुरुमा कोरोना आशंका गरिएकोमा उहाँलाई पछि क्यान्सर पत्ता लागेको थियो । मुम्बइको लिलावती अस्पतालमा भर्ना भएका ६१ बर्षका संजयको शरीरमा अक्सिनको तह कम भएपछि र वेचैनी बढेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । साउन २९ मा आफ्नो फोक्सोको क्यान्सर बारे बलिउड स्टार सञ्जय दत्तले पहिलो पटक मुख खोल्नुभएको थियो । इन्स्टाग्राम लाइभमार्फत् समस्या बारे भने क्यान्सरलाई चाँडै हराएर छाड्ने प्रीतबघता पनि दिनुभएको थियो । एक सय ५० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गर्नुभएका दत्त आफू नोभेम्बरमा नयाँ फिल्म छायाँकनलाई लागि फ्लोरमा निस्कने बताउनुभएको थियो । सुरुमा स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिए पछि कोभिड(१९ परीक्षण गरिएको थियो। तर संक्रमण पुष्टि भएन। लगत्तै मुम्बईस्थित…
डिसेम्बरसम्म ३० करोड कोरोना भ्याक्सीन उत्पादन हुने
काठमाडौं,२ कार्तिक । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सारा विश्वमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सीन बनाउने काम भईरहेको छ । साथै कोरोनाको बारेमा विभिन्न रिसर्च भईरहेको छ । भारतको सीरम इन्स्टीट्यूटले डिसेम्बरसम्ममा २० देखि ३० करोड भ्याक्सीन आउने दाबी गरेको छ । इन्स्टीट्यूटका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सुरेश जाधवले यो दाबी गरेका हुन् । हेल फाउण्डेशनद्वारा आयोजित फार्मा एक्सीलेन्स ई समीट २०२० लाई सम्बोधन गर्दै उनले मार्च २०२१ सम्म भ्याक्सीनको फाइनल टेस्ट सकिने बताएका छन् । सीरमले एक वर्षमा ७० देखि ८० करोड भ्याक्सीनको डोज उत्पादन गर्न सक्ने पनि उनले बताएका छन् । यसैबीच भारतमा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म १ लाख १४ हजार ६४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७४ लाख ९२ हजार ७२७ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यस्तै ६५ लाख ९४ हजार ३९९ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ७ लाख ८४ हजार २६४ जना उपचाररत छन् । त्यस्तै ८ हजार ९४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । त्यस्तै भारतमा…
भारतमा ९१ हजार १४९ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, संक्रमित संख्या ५७ लाख नाघ्यो
नयाँदिल्ली, ८ असोज । भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ५७ लाख ३२ हजार नाघेको छ । विगत २४ घण्टाको अवधिमा ८६ हजार ५०८ जना नयाँ संक्रमित थपिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टाको अवधिमा एक हजार १२९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कूल संख्या ९१ हजार १४९ जना पुगेको छ । भारतमा हाल ९ लाख ६६ हजार सक्रिय संक्रमित छन् भने ४६ लाख ७४ हजार ९८८ जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् । भारतीय राज्य महाराष्ट्र सबैभन्दा प्रभावित रहेको छ । त्यहाँ हालसम्म २ लाख ७४ हजार सक्रिय संक्रमित छन् भने ९ लाख ५७ हजार निको भएकार छन् । यहाँ ३३ हजार ८८६ जनाको कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । कर्नाटका राज्यमा हाल करिब ९५ हजार व्यक्ति सक्रिय संक्रमित छन् भने ४ लाख ३८ हजार निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् । यहाँ ८ हजार २६६ जनाको मृत्यु भएको…
पेरिस, ८ असोज । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ८२ हजार पुगेको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर तीन करोड २१ लाख छ । कूल संक्रमितमध्ये दुई करोड ३६ लाख निको भएका छन् भने करिब ७५ लाख मानिस सक्रिय संक्रमित छन् । विश्वभर अझै पनि ६२ हजार मानिसको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल रहेको छ । पेशा व्यवसाय खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने विषयमा दोधारमा रहेको संयुक्तराज्य अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने यहाँ संक्रमितको संख्या पनि ७१ लाख नाघिसकेको छ । कोरोना संक्रमणबाट अमेरिकामा हालसम्म दुई लाख ६ हजारको मृत्यु भएको छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको भारतमा ५७ लाख संक्रमित भएका छन् भने यहाँ ९१ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै ब्राजिलमा ४६ लाख व्यक्ति संक्रमित भएकामा एक लाख ३९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । खोप विकास गरिसकेको घोषणा गरेको रसियामा पनि…
कस्तो कारणले गर्भावस्थामै शिशु तेस्रोलिङ्गी बन्छ ?
काठमाडौ,२८ भदौ । यो संसारमा मानिसलाइ दुइ प्रकारका बिभाजित गरिएको छ । एउटा पुरुष अर्को महिला । यि दुइबिचमा एउटा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि भिन्न हुन्छन्, देखिन्छन् ।जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं । वास्तवमा , ट्रांसजेंडरलाई पुरुष र महिलाहरुको बर्गमा समावेश गर्न सकिदैन , यस प्रकारका मानिसहरुमा महिला र पुरुष दुवैको गुण समावेश हुन्छ । यस्ता मानिस वााहिरबाट पुरुष देखिन्छन तर भित्रि रुपमा महिलाहरुको गुण हुन्छ , यस्तै बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन । गर्भाधारणको पहिलो तीन महीनाको अवधिमा शिशुको लिंग बन्ने गर्छ । यस अवधिमा यदि कुनै प्रकारको चोट, टाक्सिक खानपान, हार्मोनलको समस्याले गर्दा शिशु महिला या पुरुष बन्ने भन्दा पनि दुवैको गुण वा आर्गन्स हुन जान्छ , त्यसैले गर्भाधारणको ३ महीना महिलाहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । गर्भाधारणको यि अबस्थामा शिशुहरु तेस्रो लिङगी बन्ने संभाबन रहन्छ : १. गर्भाधारण पहिलो ३ महिनामा यदि गर्भवती महिलालाई…
कोरोनाका कारण विदेशमा २४३ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौँ,२८ भदौ । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट शनिबार साँझसम्म नेपालबाहिर विभिन्न १६ मुलुकमा मृत्यु भएका नेपालीको सङ्ख्या २४३ पुगेको छ । यो साता मात्रै थप ४३ नेपालीको निधन भएको पुष्टि भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाले बताउनुभयो । गत मार्च महिनायता साउदी अरबमा मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँस्थित राजदूतावासलाई उद्धृत गर्दै स्वास्थ्य समितिले उल्लेख गरेको छ । यो सँगै साउदी अरबमा मात्रै सङ्क्रमणका कारण निधन हुने नेपालीको सङ्ख्या ५२ पुगेको साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत डा महेन्द्रसिंह राजपुतले जानकारी दिनुभयो । यो साता कतारमा पनि थप दुई नेपालीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण निधन भएको छ । स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता स्पेन, पोल्याण्ड, भारत, कतार, र साउदी अरबलगायतका मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणदर सामान्यरूपमा वृद्धि भएको छ । समितिका अनुसार हालसम्म विश्वका ४० देशमा रहेका नेपाली कोरोना–१९ बाट सङ्क्रमित छन् । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड्स, स्वीडेन,…
पाँच हजार डोज रेम्डिसिभिर नेपाल ल्याइयाे
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । बंगलादेशले कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभिर नामक औषधि सहयोग स्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत आज साँझ पाँच हजार थान ती औषधि स्वदेश ल्याइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सहायकरथी आशिष नरसिह राणाको नेतृत्वमा गएको पाँच सदस्यीय टोलीले ल्याएको उक्त औषधि आइतवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा रेम्डिसिभिर निकै उपयोगी मानिन्छ । यसको प्रयोग परीक्षणका रूपमा चिकित्सकको निगरानीमा मात्र गर्न पाइन्छ ।
भारतमा एकैदिन ९७ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको दैनिक सङ्ख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ९७ हजार ५७० जना सङ्क्रमित भएको अधिकारीहरुले शनिबार जानकारी दिएका छन् । योसँगै भारतमा कोरोनाभाइरसबाट अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या ४६ लाखभन्दा बढी पुगेको देखिएको छ । संघीय (केन्द्रीय) स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाहरुको कुल सङ्या अहिलेसम्म ७७ हजार ४७२ पुगेको छ । कुल मृतकमध्ये एक हजार २०१ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ । भारतमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म कुल ४६ लाख ५९ हजार ९८५ जना सङ्क्रमित भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ती मध्ये ३६ लाख २४ हजार १९७ जना सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार अरु नौ लाख ५८ हजार ३१६ जना अझै पनि सङ्क्रमित अवस्था मै रहेका छन् । भारतमा सवैभन्दा बढी महाराष्ट्र प्रदेश प्रभावित भएको छ । महाराष्ट्रमा मात्रै अहिलेसम्म कोरोनाकै कारणले २८ हजार जनाको मृत्यु भएको…
अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण किन रोकियो ?
एजेन्सी । एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीले कोरोनाभाइरसविरुद्ध बनाएको एउटा खोपको अन्तिम चरणको मानव परीक्षणमा सहभागी एक व्यक्ति यूकेमा बिरामी परेपछि उक्त परीक्षण तत्कालका लागि रोकिएको छ। एस्ट्राजेनेकाले यसलाई अस्पष्ट कारणले समस्या उत्पन्न हुँदा गरिने “नियमित” विराम भनेको छ। अहिले विश्वभरि विभिन्न खोपका परीक्षणहरू भइरहेका छन्। एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीले निर्माण गरेको खोपलाई परीक्षणमा भएकामध्ये केही अरूसँगै प्रभावकारी मानिएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सफल देखिएको उक्त खोप बजारमा चाँडै आउने अपेक्षा छ। केही सातायता सुरु भएको तेस्रो चरणको परीक्षणमा अमेरिका, यूके, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेर झन्डै ३०,००० व्यक्ति सहभागी छन्। तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा प्रायः हजारौँ मानिसहरू सहभागी हुन्छन् र यो वर्षौँसम्म चलिरहन सक्छ। खोप निर्माताहरू के भन्छन् ? एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट सुरक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कको समीक्षा गर्न उक्त खोपको परीक्षण सबै देशमा रोकिएको छ। त्यसपछि नियामक निकायहरूले खोप परीक्षण फेरि थाल्ने कि नथाल्ने भनेर निर्णय गर्ने बीबीसीका मेडिकल सम्पादक फेर्गुस वाल्शले जनाएका छन्। ”ठूला परीक्षणहरूमा संयोगवश कोही बिरामी परेको…
कोभिड विरुद्धको खोप अर्को वर्षको मध्यपछि मात्र बजारमा आउछ: विश्व स्वास्थ्य संगठन
जेनेभा, २०भदौ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड १९ विरुद्धको खोप निस्केपछि पनि आगामी वर्ष सन् २०२१ को मध्यसम्ममा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिकले यो खोप आइसकेपछि पनि ठूलो मात्रामा बजारमा आउनका लागि कम्तीमा पनि आगामी वर्षको मध्यसम्म लाग्नसक्ने बताउनुभएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिक सोउम्य स्वामीनाथनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिनुभएको बताइएको छ । उहाँले सो पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भन्नुभएको थियो– मलाई लाग्छ यो खोप बजारमाा आइसक्नका लागि अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को मध्यपछि मात्र सम्भव हुनसक्छ । त्यस समयमा खोप बजारमा आउने र त्यसपछि विश्वका विभिन्न देशहरुमा पनि पुग्न सकने देखिएको भन्दै उहाँले त्यसपछि विभिन्न देशहरुमा त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले उक्त खोपको पछिल्लो लट अर्थात् तेस्रो तहमा हुन लागेको ट्रायल यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मात्र पूरा हुने बताउनुभयो । त्यस ट्रायलको परीणाम यसै वर्षको अन्त्यसम्मा या आगामी वर्षको शुरुसम्ममा आइसक्ने र त्यसपछि खोपको उत्पादन प्रक्रिया शुरु हुने…
दक्षिण कोरियामा एकैपटक १८ नेपालीमा कोरोना संक्रमण
साेल,१८ भदौ । दक्षिण कोरियामा नेपालीलाई पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ । यहाँको चोङ्नामस्थित हानुल नोङ्सान नामक एक फुड कम्पनीमा कार्यरत १८ नेपालीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको दक्षिण कोरियाको सरुवा रोग नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । कम्पनीमा कार्यरत २० वर्षीया नेपाली युवतीले आफूलाई असहज महसुस गरेपछि कोरोना परीक्षा गराएकी थिइन् । परीक्षणपछि उनमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सँगै कार्यरत अन्यको पनि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । सङ्क्रमित १८ जनाकै उपचार भइरहेको र उनीहरूसँगै काम गर्ने तथा सँगै बस्ने अन्य २६ जनालाई आइसोलेशनमा राखिएको छ । उनीहरूसँंग सम्पर्क भएको भनिएका १३१ जनाको पनि परीक्षण भइरहेको सरुवा रोग नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । रासस
प्लाज्मा थेरापीले जगाउँदै आशा,४५ जना संक्रमित निको भए
काठमाडौँ,१७ भदौ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप वा औषधि बजारमा आइसकेको छैन । विकल्पका रूपमा अपनाइएको प्लाज्मा थेरापी नेपालमा भरपर्दो आशाको किरण बनेको छ । प्लाज्मा थेरापी बिरामीको अनुमतिमा परीक्षणकै क्रममा रहे पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँ प्लाज्मा थेरापीले हानि गर्दैन, त्यसैले रगत दिन र लिन डराउनुपर्दैन भनेर सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य बिरामीले अनुमति दिएको खण्डमा प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग त्यस्ता कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितमा भइरहेको छ । हालसम्म यस थेरापीबाट ४५ जना निको भइसकेका छन् । अमेरिका लगायत विकसित देशमा पनि प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसविरुद्ध विकल्पको औषधिका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएर निको भएका व्यक्तिको रगत अन्य बिरामीलाई दिएर गरिने उपचारविधि रहेको ज्ञवालीले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले सङ्क्रमण मुक्त भएको दुई हप्तापछि ती व्यक्तिको रगतको प्लाज्मा अन्य सङ्क्रमितलाई दिन योग्य हुन्छ, १८ वर्ष उमेर माथिका व्यक्तिले रगतको प्लाज्मा दिएर…
कोरोना उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग कति प्रभावकारी ?
काठमाडौं,१७ भदौ। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन र औषधि तयार नहुँदासम्म आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोगमा ल्याइएको रेमडेसिभिर (एन्टिबाइल) नामक औषधि गत सातादेखि नेपालमा पनि संक्रमितमा प्रयोग हुन थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा क्लिनिकल परीक्षणका रूपमा प्रयोग भइरहेको रेमडेसिभिरलाई नेपालमा पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’का लागि ११ अगस्टमा प्रयोगमा ल्याउन स्विकृति दिइएको छ । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले रेमडेसिभिर नेपाल आयात गर्न तीनवटा भारतीय औषधि कम्पनी (सिप्ला, हेटेरो र माइलन)ले अधिकार पाएको जानकारी दिए । जसमध्ये हाल माइलन कम्पनीमार्फत आयात गरिएको औषधि नेपालमा प्रयोगमा आउन थालेको छ । अन्य दुई कम्पनीले औषधि पठाउने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन् । विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीमा रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोगबाट सामान्यभन्दा निकै समयअगाडि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको भन्दै आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग भइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले छोटो समयमै संक्रमण निको पार्न सहयोगी भएकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिने देखाएपछि नेपालमा पनि ट्रायलकै रूपमा प्रयोगमा ल्याउन औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएको हो…
तत्काल नेपालमा कोरोना खोपको परीक्षण नगरिने
काठमाडौँ, १५ भदौ । नेपालमा तत्कालका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोपको सामूहिक परीक्षणको सम्भावना टरेको छ । विज्ञसहित बृहत् छलफल र त्यसबाट आएको सुझावका आधारमा सामूहिक खोप परीक्षणमा नेपालको सहभागिता तत्काल पछि सारिएको हो । खोपको विश्वसनीयताका विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान भने जारी रहनेछ । विश्वका हुने विभिन्न विषय र क्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक लगायत विषय पनि जोडिने भएकाले तिनको विषयवस्तुुमा ध्यान दिँदै त्यस्ता गलत गतिविधिबाट नेपाल जोगिन सामूहिक खोप परीक्षणको सम्भावना पर सार्ने निर्णय गरिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामूहिक परीक्षण नेपालमा गर्दैमा पनि सफल हुन्छ भन्ने छैन । थप विस्तृत अध्ययन, विश्लेषणपछि मात्र खोप परीक्षण हुनसक्छ भन्नेमा विज्ञको एकमत रह्यो भन्नुभयो । मानवमा हुने सामूहिक परीक्षण बाहेक क्लिनिकल तथा ल्याब परीक्षण गर्न नेपालले आफ्नो ढोका तत्काल खुला राखेको छ । त्यसका लागि परिषद्ले सहकार्य गरेर जाने मोडलमा कुनै पनि कम्पनी, देश वा व्यक्तिले गरेका प्रारम्भिक चरणका अनुसन्धानमा सहभागिता जनाउने…
खोप परीक्षणमा नेपालको तयारी, ६ किसिमका खोप अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ,१२ भदौ । विश्वलाई आतङ्कित बनाइरहेको कोरोना भाइरसको प्रकोप निमिट्यान्न पार्न विभिन्न मुलुकले यसविरुद्ध खोपको परीक्षण गरिरहेका छन् । यसरी विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यलाई लिएर निर्माण गरिएको खोपको परीक्षणमा नेपाल पनि सहभागी हुने प्रयासमा छ । यसरी खोपको परीक्षण नेपालमा हुन लागेको पहिलो पटक हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ)को सूचीमा रहेकामध्ये अन्तिम परीक्षण पार गर्दै गरेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेना कम्पनीले उत्पादन गरेको सीएचएडीओएक्स १–५ खोप र चीनको साइनोभ्याक्स अर्थात् ‘इनएक्टिभेटेड’ नामको खोपको अन्तिम क्लिनिकल परीक्षणमा नेपाल पनि सहभागी हुने झण्डै तय जस्तै भएको छ । तथापि अन्तिम निक्र्योल हुन बाँकी छ । खोपको परीक्षण गर्न दिन हुने÷नहुने विषयमा थप अध्ययनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परिषद्ले यसको विश्लेषण गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार तीन कम्पनीले नेपालमा खोप परीक्षणका लागि अनुमति मागेको हो । मन्त्रालयको स्वीकृतिलगत्तै परीक्षणको थप अध्ययन थालिएको परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । चीन, रसिया र अक्सफोर्ड युभिर्सिटीले तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गर्न अनुमति मागेको र…